ESI WEPU NDEPỤTA NA ITUNES - ITUNES - 2019
Otu esi ewepu listi ọkpụkpọ na iTunes
Ogologo CD / DVD a dochie anya ogologo oge ndị ọzọ nwere ike ịdabere ma dị mfe nke na-adọrọ mmasị n'ụdị nke eriri USB na kaadị nchekwa microSD. Otú ọ dị, ụzọ ndị a nke ịchekwa ozi adịghị adị ebighi ebi. Igwe ọkụ na-ada ada, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-edekarị ihe na ya ma kọwaa ya mgbe ọ bụla ojiji. N'okwu a, RecoveRx na-abịa napụta.
RecoveRx bụ usoro dị mfe na nke dị mfe iji mee ihe dị iche iche na mpụga site na ụlọ ọrụ a ma ama Transcend, nke na-etinye aka na mmepụta ha. O nwere ọtụtụ atụmatụ bara uru nke ga-eweghachi ndụ faịlụ na windo mbanye, nhazi ya ma ọ bụrụ na enweghi ike ime ya site na iji ngwá ọrụ ruru eru, ma kpochie kaadị SD.
Anyị na-akwado ịhụ: ụzọ 6 iji weghachi Transcend flash drive
Ọrụ a bara uru nye onye ọ bụla hụtụrụla usoro nhazi. "Enweghị ike imeghe ụgbọala, gbanye ya". Na nke a, faịlụ niile echekwara na windo ọkụ ahụ furu efu, ebe ọ bụ na ị ga-agbanye ya. Mana n'ihi ezughị okè nke usoro nhicha ahụ, a ga-enweta data niile site na iji ọrụ a.
Ọ bụghị obere oge ka ọnọdụ ahụ dị ma ọ bụrụ na ejighị ngwa ngwa Windows arụ ọrụ. Ọrụ a ga - enyere aka n'ọnọdụ a ka ọ bụrụ usoro nchekwa ọ bụla.
Ọrụ ikpeazụ nke usoro a bụ iji wụnye mkpọchi na kaadị microSD, nke ga-eme ka ị nweta data na ngwaọrụ gị. Ma ọ bụrụ na ị nwere kaadi transcend kaadị, ị nwere ike igbochi ya site na ndị na-agụ akwụkwọ kaadị ọzọ na-agụghị ya RDF8.
Ikike iji weghachite data;
Na-arụ ọrụ na ndị nrụpụta niile a ma ama;
Enweghị asụsụ Russian;
Ọ dịghị tweaks.
RecoveRx bụ ngwá ọrụ dị ukwuu maka ịrụ ọrụ na kaadị ebe nchekwa na draịva flash. Ọ bụ ntakịrị ihe, nghọta, nke dị jụụ, ma ọ bụ enweghị ọrụ arụmọrụ. SD lockdown bụ ihe a ma ama n'etiti ọrụ ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ọrụ a anaghị adịkarị na mmemme ndị ọzọ nke ụdị a.
Download RecoveRx maka n'efu
Ngwudata Nchekwa onwe Mmemme maka ịhazi kaadị ebe nchekwa Ngwaọrụ mgbake JetFlash Goldmemory
RecoveRx bụ usoro dị mfe ma dị mfe maka ịkpụpụta kaadị ebe nchekwa na ịnweta data.
Onye Mmepụta: Transcend
Ọnụ: Free $